Maalinta: Diseembar 21, 2016
Shirkii Kayseri Erciyeste Roob Xun
Afkaarta Kayseri waa inkaar Erciyeste Argaggixiso: Kayseri khiyaano argaggixiso ah ayuu ku soo arkay Kayseri, Erciyes'te shirkiisii ​​waa la habaaray. Boqolaal skaraas ah ayaa argaggixisada ka falceliyay iyagoo wata calanka Turkiga iyo calamado. Urur argagixiso khiyaano ah [More ...]
Palandöken iyo Konaklı ayaa galaya iyagoo wata Wanaag Wanaagsan: Markii la furay furitaanka xilliga barafka ee Ejder3200 World Ski Center, habka go'aaminta qiimeynta ee loo adeegsado gondolas iyo wiishashka ayaa la dhammaystiray. Xarumaha Palandöken iyo Konaklı Ski ee Erzurum [More ...]
Kala-guurka laga soo galo Eurasia Tunnel ilaa Sanadka Cusub 15
Kala-guurka ka socda Eurasia Tunnel ilaa 15 Sannadood Cusub: Eurasia Tunnel, oo gacan ka geysan doonta xallinta dhibaatada taraafikada ee Istanbul iyadoo la mideynaayo laba qaaradood oo badda hoostiisa ah, waxaa furay Madaxweyne Erdoğan iyo Ra'iisul-wasaare Yıldırım. Siyaabaha isku xirka [More ...]
Bursa Teleferik A.Ş, Teleferik waa safarka ugu nabdoon adduunka: Bursa Teleferik A.Ş, ayaa bayaan ka soo saartay wararka saxaafadda. Maalmihii la soo dhaafay, hoteel ku yaal magaalada Uludag oo ay ka dhasheen ku guul darreysiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xaaladan ku xayiran. [More ...]
Argagax bambo oo ka dhacay Saldhigga Tareenka ee Cologne: Ciidamada amniga ayaa dadka ka daadgureeyay saldhigga tareenka ee Cologne, Jarmalka. Natiijada baaritaanka waxaa la bartay in caarada aysan sal ku laheyn Cologne, Jarmalka [More ...]
Farriinta bulshada ee ku dhex taal hangarayaasha taraafikada ee Gaziantep: Carshooyinka, oo sidoo kale loo yaqaan gacan-qabashada, ayaa la yaabay oo ka fekeray kuwa arkay ballanqaadyadii pithy ee farriimaha bulshada. [More ...]
Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu sameeyey bayaan ku saabsan kaararka da'da 60: 125-60 da'da muwaadiniinta oo u adeegsan kara oo keliya kaararka gaadiid ee ay heleen lacag sanadle ah oo ah 65 TL inta u dhaxaysa saacadaha xaddidan, 31 [More ...]
izmirde Karşıyaka Korantada Koowaad illaa Xariiqa Tram
izmirde Karşıyaka Korantada Koowaad illaa Xariiqa Tram:Karşıyaka Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo bilawday inay caws saarto qadka tareenka ee wadada tareenka, ayaa bilaabay inay tijaabiso duullimaadyada u dhexeeya Mavisehir iyo Bostanli Bridge illaa Jimcaha. [More ...]
Davut Gül gudoomiye waaxeed ee waaxda tareenka: TÜDEMSAŞ Maareeyaha guud Yıldıray Koçarslan “Waxaan nahay urur arima muhiimad u leh waxbarashada sida wax soo saarka. [More ...]
RayHaber 21.12.2016 Warbixinta Shirka
Haydarpaşa Station CCTV Xirmay Nidaamka Kaamirooyinka Wareegtada Cillada Khilaafaadka Shaqada Shaqaalaha Adeegga waxaa la Qaadi doonaa Adeegga Shaqaalaha Waxaa la Qaadi doonaa
Mushta Land Stuck Tareenka Ardayda Hit by Tareenka Freight
Tareenka Xamuulka ah ee loo yaqaan 'Freight Train Hit' Adeegga Ardayda: Hal arday oo ah 2 qof ayaa ku dhaawacmay ka dib markii tareenka xamuulku ku dhuftay adeegga ardayda ee ku xayiran Muş. Naafada ayaa laga keenay xarun dhaqancelin gaar ah [More ...]
Shiinaha xawaaraha sare ee Shiine ah ayaa markii koowaad galay suuqyada EU-da
Tareenada xawaaraha dheereeya ee Shiinaha ayaa soo galaya suuqa EU markii ugu horeysay: Soo saaraha ugu weyn Shiinaha ee soo saaraha xawaaraha sare CRRC wuxuu dhowaan yimid Prague oo ay la socoto shirkada tareenka gaarka loo leeyahay ee Czech Republic Loe Express. [More ...]